पुनर्वासको आकाशमा देखियो ३९ वटा विमान स्थानीय त्र’सित ! के हुदैछ यस्तो ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/पुनर्वासको आकाशमा देखियो ३९ वटा विमान स्थानीय त्र’सित ! के हुदैछ यस्तो ?
एसईईको नतिजा प्रकासित गर्न थालियो यस्तो तयारी !